Ragga Aad Ayay U Jecel Yihiin In Ay Erayadaan Ka Maqlaan Lamaantooda - Arimaha Bulshada
Ragga Aad Ayay U Jecel Yihiin In Ay Erayadaan Ka Maqlaan Lamaantooda
Gabaryaheey erayo yar ayaa laga yaabaa in nolosha ninka ay wax weyn ka badasho , waxaa jira erayo ninka farxad gilinaya halka erayo kalana ay bur buriyaan nolosha ninka ,Hadaba Arimahabulshada.com ayaa ku siineysa talooyin iyo erayada uu ninka jecel yahay in uu maqlo .
1- Aniga Waan Ku Garab Taaganahay : ninku waxa uu u baahan yahay taageero macnawi iyo nafsiyan ah si joogta ah , erayada ugu macaan ee nafsiyan ninku jecel yahay waxa ay tahay in uu dareemo in kaligiis uusan aheyn .
In uu maqlo erayada ah aniga ayaa ku garab taagan ninku waxa ay siineysaa awood iyo dhiira gilin u saamaxeysa in uu horay u sii dhaqaaqo .
2-Waxaa Tahay Aabo Wanaagsan: Ogaaw haddii ninku yahay aabo aad ayuu u jecel yahay in uu maqlo erayga ah aabo wanaagsan ayaa tahay , tani waxa ay dhab ahaan ugu filan tahay farxad middii ugu dambeysay
3- Adiga waad awoodaa in aad sameyso arintaas: mararka qaar ninka xaalado adag ayuu soo marayaa waxa uuna dareemayaa xiligaas in arimaha horyaal uusan sameyn karin, hadaba gabaryaheey doorkaada ayaa la joogaa oo sii dhiira gilin kuna dheh waad awooddaa sameynta arintaan , tani awood uusan laheyn ayay ka soo saareysa .
4-Muuqaalkada aad ayuu u wacan yahay : haween badan ayaa aamisan in ninku uusan dan ka laheyn muuqaalkiisa oo uusan dan ka laheyn in dadka muuqaalkiisa cajab giliyo balse tani ma jirto .
Erayada uu ninka jecel yahay in uu lamaantiisa ka maqlo waxa ay tahay muuqaalkada aad ayuu u u qurxoon yahay iskaba daayee labiskaada .
5- aad ayaad u caqli badan tahay : tilmaanta caqli badnaashaha waa midda ninka mar waliba uu rajeeyo in uu lahaado .
Ha ka bakhiilin in aad ku tiraahdo aad ayaa u caqli badan tahay tani waxa ay u muujineysaa in dadka kale iyana ay qadarin u hayaan oo ay dareemayaan caqligiisa badan .